Sprinklr: Fampiasana ara-tsosialy azo antoka ho an'ny orinasa | Martech Zone
Sprinklr: Fampiasana ara-tsosialy azo antoka ho an'ny orinasa
Alarobia, Martsa 6, 2013 Douglas Karr
Ny orinasam-pandraharahana dia manana fanamby maro izay mitaky ny famokarany ny vokariny amin'ny fomba hafa. Ny rindranasan'ny orinasa dia manana andraikitra, fahazoan-dàlana, fanaovana tatitra ary alàlan'ny asa an-trano, mety mitaky làlan-kaonty amin'ny indostrian'ny fahasalamana sy ara-bola izy ireo, ary tokony hamarinina araka ny tokony ho izy. Ao anatin'ny haino aman-jery sosialy, fanamby faran'izay sarotra izany noho ny fanamby goavana sy ny sehatra maro azo.
Altimeter no laharana Sprinklr as mahay indrindra hanomezana fahafaham-po ny filan'ny orinasa lehibe. Ny Econsultancy dia nametraka an'i Sprinklr ny sehatra avo indrindra azon'ny orinasa 2 taona misesy. Miaraka amin'ny mihoatra Marika anaran'ny tokantrano 200 amin'ny maha mpanjifa azy ary fanaparitahana mpampiasa hatramin'ny 5000 any amin'ny firenena 10s… izy ireo tokoa no mitarika ny fonosana.
Sprinklr dia manome sehatra orinasa SaaS tena izy izay manolotra:
Fitantanana ara-tsosialy ao anatin'izany ny fananana kaonty sy ny fankatoavana manerana ny sehatry ny asa sy ny jeografia anatiny.
Fiaraha-miasa ara-tsosialy manerana ny kaonty sy fantsona marobe (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr, Foursquare, Slideshare, Blogs sns.) ao anatin'izany ny fizotran'ny asa sy ny fitantanana an-tsokosoko ao anatin'izany ny fizarana, ny fanamboarana ary ny famoahana fantsona maro.
Fitantanana mpijery ara-tsosialy ao anatin'izany ny fanentanana sy ny fandraisana anjara amin'ny isa amin'ny Social Analytics izay manome fantsona avo lenta ary fitaterana sy fahitana ny fampielezan-kevitra.
Social Integration ahafahana mifandray amin'ireo rafitra misy eo amin'ny fifanakalozana sy ny tatitra momba ny orinasa.
Na dia misy vokatra hafa mifaninana amin'ny sehatry ny orinasa aza dia misy ny fanavahana sasany lehibe amin'ny Sprinklr. Voalohany, izy ireo irery orinasa-mifantoka. Maherin'ny 80% ny mpanjifany no manana karama mihoatra ny $ 1 tapitrisa. Ny rafitry ny fitantanana ny haino aman-jery sosialy dia manome fotodrafitrasa hahafahan'ny orinasa sosialy amin'ny fantsona, ekipa, asa, fizarazarana ary jeografia. Ary namboarina ho an'ny ambaratonga izy ireo - ny zavatra toy ny Processing amin'ny fiteny voajanahary, ny lalàna mandeha ho azy izay misy fika, fihetsika ary sivana, fitantanana ara-tsosialy iraisana. Rehefa miatrika kaonty, resaka na mpampiasa maro an'isa ianao dia TSY MAINTSY manana izany raha tsy izany dia ho faty ianao.
Sprinklr namoaka vao haingana ity Whitepaper ity, Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanapariahana haino aman-jery sosialy orinasa azo antoka:
Tags: haino aman-jery sosialy orinasaworkflows amin'ny haino aman-jery sosialy orinasahaino aman-jery sosialy maro fantsonahaino aman-jery sosialy misy fizarana maroNy fanodinana fiteny voajanaharyfanadihadiana amin'ny media sosialytabilao media sosialyfitantanana media sosialy